Windows9ULTIMATE 2015 - X86 (3.26 Gb)
6:59 AM ဆော့ဝဲ နည်းပညာ No comments
11:20 AM Windows94 comments
Windows7Ultimate 32-bit ကို Windows 10 Apps များ၊Themes များ
ဖြင့် Modify လုပ်ထားတဲ့ Windows9Ultimate 2015 (32-bit) ကိုတင်ပေး
Code Name : Windows9ULTIMATE
Architecture : 32bit X86
Version : 6.1.7601.18409
OS Size : 3.0GB
ISO Size : 3.4GB
Update Inc : December
Windows 8.1 x86 (Core+Professional Edition) Updates 15/12/2014 (2.98 Gb)
6:57 AM ဆော့ဝဲ နည်းပညာ No comments
9:56 PM Windows 8.13comments
Microsoft ရဲ့ Original ISO ဖြစ်တဲ့ 15/12/2014 အထိ Updates များပါဝင်
တဲ့ Windows 8.1 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီ ISO မှာ Core Edition နဲ့..
Professional Edition (၂)ခုပါဝင်ပါတယ်။
Product Key .....
Core - 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
Professional - XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
Pinnacle Studio v18.0.1.10212 Ultimate Multilingual w Content Pack and Addons (32bit)-(7.88 Gb)
5:33 AM ဆော့ဝဲ နည်းပညာ 1 comment
Effects,Templates,Perfect Soundtrack များနဲ့ Transitions ပေါင်း(၂ဝဝဝ)
ကျော်ပါဝင်တဲ့ Video Editor Softwares ထဲမှာ အပြည့်စုံဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံး
ဆော့ဝဲတခုဖြစ်တဲ့ Pinnacle Studio v18.0.1.10212 Ultimate Edition ကို
Pinnacle Studio v18.0.1.10212 Ultimate Multilingual w Content Pack and Addons(32bit)
Take on any video-editing challenge with Pinnacle Studio 18 Ultimate, our most complete
version. Powered byanew native 64-bit architecture, Ultimate lets you create breathtaking
movies with support for 4K Ultra HD video. You get all the features of Pinnacle Studio Plus
and more, including NewBlue bonus effects, Blu-ray authoring, iZotope Music & Speech
Cleaner, additional Scorefitter soundtracks, and support for XAVC S for 4k and HD.
Energize your videos with 2,000+ transitions, effects and templates, add the perfect
soundtrack, and easily share online, on disc and on devices.
Drag and drop elements to makeamovie automatically or use the Storyboard mode to plan.
More experienced editors can use the timeline for precision editing.
Record content from your screen and include the footage in movies with Live Screen
Capture. Even add voiceover while you capture!
Combine an unlimited number of video and audio track for multi-layer editing,
and create custom-fit soundtracks with Scorefitter.
Take your videos to the next level with over 700 presets and more than 55 plugins
Light Blends - Light-inspired scene transitions with light flairs, orbs, rays,
strobes and more.
Film Effects - Create an authentic, old school film look with blemishes, jitters, spots,
scratches and graininess.
Video Essentials2- Createavignette, swap specific colors inascene, add
picture-in-picture, and correct lens distortion.
Video Essentials6- Remove subtle imperfections, replicate footage intoavideo
wall, magnifyavideo segment for emphasis.
Video Essentials7- Avoid tedious keyframing when applying pixelation, easily
pan and zoom on still or video, and more.
If you're shooting video in 4K Ultra HD, Pinnacle's got you covered with 4K Ultra HD
Video support that includes new XAVC S support and 4K smart encoding.
iZotope Music & Speech Cleaner easily removes unwanted noise from your audio
and video files. Experience increased audio clarity and enhanced sound!
Post your movies online with one-click sharing to Facebook, YouTube and Vimeo.
Create DVDs and Blu-ray™ discs, and export your movies to popular formats to
play them on game consoles and mobile devices.
Geta6-week, all-access pass to StudioBacklot.tv, featuring brand-new Pinnacle
Studio 18 content, loads of other training andaroyalty-free stock library.
English – Translated by google
Recommended installation in OC Windows 8, Windows7installed onaformatted
separate physical hard drive assigned itadrive letter "C". Possible (not recommended)
to install andaseparate system partition assigned to it the system drive letter other
than "C", but in this case would require additional configuration during installation and
subsequent content updates and additions.
Before installing Studio 18 is recommended to update to the latest video card driver:
NVIDIA GeForce: http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx
Installation: run the autorun.exe file on behalf of the System Administrator
Prior to the full completion of all installations Studio 18 does not run. It is desirable to
strictly adhere to the proposed order of installations.
ALWAYS turn off UAC Control actuators. Control Panel \_ All Control Panel Items \_
Be sure to reboot the system !!!
During installation of the registration fails, click "Register later Remind me later" -
this installation is already fully activated.
အလင်းသစ်နံနက်ခင်း ဆီက ကူးလာတာပါ
6:30 PM နည်းပညာ No comments
Win7BootUpdater.mgzinmyo နည်းပညာ မင်္ဂလာပါ...မိမိကွန်ပျူတာကို အလှဆင်ရန် Windows တက်လာတာနဲ့ မိမိရဲ့ ပုံနဲ့ သုံးချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ သွားဒေါင်းကြပါ ...ကျနော့်ထက် အရင်လေ့လာထားကြတဲ့ ဆရာတွေအဖို့ ရည်စရာ ဖြစ်နေပါစေ ကျနော်ကတော့ ကျနော်ရရှိထားတဲ့ Software လေးတွေ နည်းပညာလေးတွေကို အခုမှ အခြေခံ တဲ့ ဆရာသမားတို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ် ...သိလွန်းလို့ တတ်လွန်းလို့ တော့မဟုပ်ပါ ဒီလိုကလိရင်းနဲ့ ရရှိလာတဲ့နည်းပညာလေးတွေကို ကျနော်တို့ရဲ့ ဆရာသမားတွေအတွက် မျှဝေပေလိုက်ပါတယ်......လိုအပ်ရင်တော့ အောက်မှာသွားဒေါင်းပြီး ပုံလေးတွေကိုကြည့်ကာ မိမိစိတ်ကြိုက် အလှဆင်နိုင်ပါတယ် ..အဆင်ပြေပါစေ.
Download Win7BootUpdater Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win
password တောင်းပါလိမ့်မယ် mgzinmyo2015 လို့ ထည့်လိုက်ပါ
password တောင်းပါလိမ့်မယ် mgzinmyo2015 ကိုထည့်လိုက်ပါ Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win
Win7BootUpdater.mgzinmyo နည်းပညာ မင်္ဂလာပါ...မိမိကွန်ပျူတာကို အလှဆင်ရန် Windows တက်လာတာနဲ့ မိမိရဲ့ ပုံနဲ့ သုံးချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ သွားဒေါင်းကြပါ ...ကျနော့်ထက် အရင်လေ့လာထားကြတဲ့ ဆရာတွေအဖို့ ရည်စရာ ဖြစ်နေပါစေ ကျနော်ကတော့ ကျနော်ရရှိထားတဲ့ Software လေးတွေ နည်းပညာလေးတွေကို အခုမှ အခြေခံ တဲ့ ဆရာသမားတို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ် ...သိလွန်းလို့ တတ်လွန်းလို့ တော့မဟုပ်ပါ ဒီလိုကလိရင်းနဲ့ ရရှိလာတဲ့နည်းပညာလေးတွေကို ကျနော်တို့ရဲ့ ဆရာသမားတွေအတွက် မျှဝေပေလိုက်ပါတယ်......လိုအပ်ရင်တော့ အောက်မှာသွားဒေါင်းပြီး ပုံလေးတွေကိုကြည့်ကာ မိမိစိတ်ကြိုက် အလှဆင်နိုင်ပါတယ် ..အဆင်ပြေပါစေ.... Download Win7BootUpdater password တောင်းပါလိမ့်မယ် mgzinmyo2015 ကိုထည့်လိုက်ပါ You might also like: ရွာအလွမ်း-ခိုင်ပြည်ကျော် မြန်မာမတွေ သင်္ကြန်မှာ ရခိုင်အသဘာဝအလှဓါတ်ပုံများစုဝေးရာ ကျောက်ဖြူမြို့ ကံ့ကော်တောဘုရားသမိုင်း အကျဉ်းချုပ် အားလုံးမင်္ဂလာပါရခိုင်သားရို့CyberLink PowerDirector 8 Video ... Linkwithin5Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest ရှာဖွေစုဆောင်းသူ by Mg Zin Myo ပို့အမျိုးအစား Software ရှာရန်သုံးပါ , နည်းပညာ တင်ပေးသော နေ့စွဲ... Sunday, October 05, 2014 No comments : PostaComment အောက်မှာ Comment အားဆေး လေးပေးသွားပါဦး.... Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments ( Atom ) ဆက်တွဲ အကြောင်းရာများ ရခိုင်တေးခြင်းတိ ရခိုင်ကဗျာ ရခိုင့်အာဇာနီခေါင်းဆောင်များ ရခိုင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု … ငွေပန်းထိမ် လက်ရာများ ရှေးခေတ်လက်ရာ ကာတွန်း သုတစာပေ ရခိုင်အသဘာဝအလှများ Arakanese Websites and Bloggers My Music ရခိုင်သားရို့ Facebook စာမျက်နှာ Ringtones မိတ်ဆွေတို့ စိတ်ဝင်စားပါက သွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည် Flag Counter web widgets Members ၀င်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် အဂုပိုင်လာရောအားပီးယေအတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးပါနှေင်း.. ခင်မင်ရင်းနီးရသော မိတ်ဆွေများ ဒီမှာနှိပ်ပါ ဆက်စပ်မှု့ Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Cool Blue Outer Glow Pointer တကယ်လို့အဆင်မပြေတာရှိရင်(ဒီကနေ)ကျနော့်ရဲ့ Gmail သို့တိုက်ရိုက်မှာလို့ရပါတယ် Name Email * Message * ကျနော်တင်သမျှလေးတွေကို facebook ကနေအလွယ်တကူဖတ်နိုင်ရန်Like ပေးထားခဲ့ပါ မိမိလိုအပ်ရာဒီမှာရှာပါ ကျနော့်ရဲ့ ဘလော့ ကို လာလည်ကြသူတို့ အဆင်ပြေကြပါစေ..လက်လှမ်းမှီသလောက်ရှာကြံတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် လာလည်ကြသူတို့ ကြိုဆိုပါယေ..ရခိုင်မြီ.... Sparkline 51800 widgeo.net မိတ်ဆွေတို့ စိတ်ဝင်စားပါက သွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည် လိုအပ်တာရှိရင်တစ်ခါတည်း ပြောသွားပါ ကျနော်လည်း တတ်လို့ လုပ်တာ မဟုပ်ပါ..ဝါသနာ အရလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်.. မောင်္ဂလာပါ အခုလိုလာလည်တာကျေးဇူးတင်ပါ-- Mg Zin Myoပြန်လည်ရှာဖွေမျှဝေပါတယ်... လေးစားစွာဖြင့်... Mg Zin Myo ရခိုင်ဘုရားပုံတော်များကြည့်ရှု့ရန် ရခိုင်ဘုရားပုံတော်များကြည့်ရှု့ရန် ဒီမှာ ရခိုင်တေးခြင်း ရခိုင်တေးခြင်း Alphazawgyi Alphazawgyi အဆင်ပြေပါစေ .အသစ်တင်သမျှရရှိရန်Email-ထားခဲ့ပါ .အသစ်တင်သမျှရရှိရန်Email-ထားခဲ့ပါ အသစ်တင်သမျှရရှိရန်Email-ထားခဲ့ပါ Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win
Win7BootUpdater.mgzinmyo နည်းပညာ Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win
7:20 AM နည်းပညာ No comments
ကွန်ပျူတာ Passwords မေ့လို့ ဖွင့်လို့မရခဲ့လျှင် (အားလုံး သိခွင့်ရအောင် ရှယ်ပေးပါ)
ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာလေးမှာ သူများမသိစေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ လေးတွေရှိလို့ Passwords နဲ့ပိတ်ထားကာမှ အချိန်ကြာလာ
သောအခါ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ နဲ့မေ့သွားတတ်ပါတယ်။ ထိုအခါ ကိုယ့်အတတ်နဲ့ ကိုယ် ကွိုင်တက်တော့တာပါဘဲဗျာ..။ ထိုအဖြစ်မျိုးကြုံတွေ့
နေရသူတွေအတွက်ကော ၊ Passwords ဖွင့်နည်း သိချင်သူတွေအတွက် နည်းလမ်းလေးများဖြစ်နိုင်သလောက် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
◘◘◘ နည်းလမ်း(၁) ◘◘◘
ကွန်ပျူတာစသုံးတဲ့အခါ သို့မဟုတ် ၀င်းဒိုးတင်တဲ့အခါတွေမှာ Username မဖြစ်မနေပေးခဲ့ရပါတယ်။ ထိုအခါ ကွန်ပျူတာမှာ Username နဲ့
Administrator ဆိုပြီးအကောင့်နှစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်။ ဥပမာ Username မှာ MgMg လို့ပေးခဲ့ရင် MgMg နဲ့အတူ Administratorဆိုတဲ့
အကောင့်က ပူးတွဲပါရှိလာပါတယ်။ မိတ်ဆွေက MgMg မှာ passwords ပေးထားခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် မေ့သွားပြီဆိုလျှင် ကွန်ပျူတာကို Restart ချလိုက်ပါ။ Restart ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် F8 ဆိုတဲ့ Key ကိုအဆက်မပြတ်နှိပ်
ပေးထားပါ။ နှိပ်ပါဟုဆိုရာတွင် ဖိထားခိုင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထိုအခါ Safe Mode မြင်ကွင်းကိုရောက်ရှိသွားပါမယ်။ Safe Mode ဆိုတဲ့
စာသားနေရာကို Arrow Key နဲ့ရွှေ့ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
အချိန်အနည်းငယ်တော့စောင့်ရပါမယ်။ ထိုအခါ ကွန်ပျူတာသည် Safe Mode မြင်ကွင်းနဲ့ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။၄င်းတွင် Administrator
နှင့်Username ( MgMg) ကိုတွေ့ရပါမယ်။ Username ( MgMg) သည် passwords မေ့နေသူရဲ့အကောင့်ပါ။ယခု Administrator
အကောင့်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ၊ Safe Mode နဲ့ဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် MgMg အကောင့်ကိုတော့ဝင်လို့ရမည်မဟုတ်ပါ။
User Account (box) ပေါ်လာပါမယ်။ ၄င်းတွင် "or pick an account to change" လို့တွေ့ရပါမယ်။ ထိုအခါMgMg ဆိုတဲ့အကောင့်ကို
ကလစ်လုပ်လို့ ရနိုင်ပါပြီ။ထိုအခါနောက်ထပ်မြင်ကွင်း တစ်ခုပေါ်လာပါမယ်။ ၄င်းတွင် "What do you want to change about account လို့
တွေ့ရပါမယ်။ ၄င်းတွင် "Change the password" ကိုရွေးချယ်ပြီး password အသစ်တစ်ခုပေးပါ။ အရင်စဉ်းစားလို့မရတဲ့ password ကို
မေ့လိုက်ပါ ။ အရင်က ဇာတ်လမ်းလေး…..အဲ..ယောင်လို့... တကယ်လို့ "Remove the password" ကိုရွေးရင် ဘာpassword မှ
ထည့်စရာမလိုတော့ဘဲ ကွန်ပျူတာပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ "Typeanew Password" မှာ passwords အသစ်ထည့်ပေးပါ။ မထည့်ချင်လဲ
ဒီအတိုင်းထားပါ။ Change password ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ ကွန်ပျူတာကို ပုံမှန်အတိုင်း Restart လုပ်ပါ။ အကောင့်မှာ password တောင်းရင်လဲ
ပတ်ဝေါ့ ပေးပြီးဝင်နိုင် ပါတယ်။ မတောင်းရင်လဲ ဒီအတိုင်းဘဲ ပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်။
◘◘◘ နည်းလမ်း(၂) ◘◘◘
◘◘◘ နည်းလမ်း(၃) ◘◘◘
ယခုနည်းတွင် ကွန်ပျူတာရဲ့ CD Drive မှာ ၀င်းဒိုးစီဒီကိုထည့်ထားပါ။ BIOS သို့ဝင်ပြီးFirst Boot ကို CD-ROM သို့ပြောင်းပါ။
ကွန်ပျူတာကို ပြန် Restart လုပ်ပါ။ ကွန်ပျူတာ ပြန်ပွင့်တာနဲ့Press any Key to boot from CD ဆိုတဲ့စာသားပေါ်လာတာနှင့်
တစ်ပြိုင်နက် ကီးခလုပ်တစ်ခုခုကို နှိပ်လိုက်ပါ။ Screen ကိုသေသေချာချာကြည့်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ ညွှန်ကြားချက်များ အတိုင်း
ဥပမာ - Licensing Agreement ပေါ်ရင် F8 ကီးကိုနှိပ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင် To set up Windows
XP … To repairaWindows XP..လို့ပေါ်လာရင် (R=Repair) ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။ R ကီးကိုနှိပ်ပါ။ ဆက်ပြီး
ဆောင်ရွက်မှုများကိုကြည့်နေပါ။ ၀င်းဒိုးစ် reboot တစ်ချက်ပြန်ဖြစ်ရင် မည့်သည့်ကီးကိုမျှ ၀င်မနှိပ်ပါနဲ့။
မြင်ကွင်းဘယ်ဘက် အောက်ခြေကို သတိပြုကြည့်ပါ။ အဲဒီမှာ "Installing Device" progress bar ဆိုတာပေါ်ရင် "Shift+F10"
၄င်းသည် အဓိကပြင်ရမယ့် နေရာဖြစ်ပါတယ်။ Command console ပွင့်လာပြီး အဲဒီမှာပြင်ရပါ့မယ်။ "NUSRMGR.CPL"
လို့၇ိုက်ထည့်ပြီး Enter ကီးကိုနှိပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ User Account (box) ကိုမြင်ရပါမယ်။ ၄င်းတွင် password ကိုပြောင်းလိုက်
ပြောင်း.. ဖယ်လိုက ဖယ်ထုတ်နိုင်ပါပြီ။
တကယ်လို့ password အသစ် မပေးချင်ရင် "Control user-passwords2" လို့ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ မြင်ကွင်းများကို ပိတ်
command box ကနေထွက်ပြီး Repair လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လုပ်ပါ။ လုပ်ငန်းအားလုံးပြီးရင် ကွန်ပျူတာကို သုံးနိုင်ပါပြီ..။
6:35 PM နည်းပညာ No comments
မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေများ တောင်းဆိုထားတဲ့ Facebook ID ကဒ်လုပ်နည်းလေးပါ.. ဒါလေးကတော့
အပျင်းပြေပေါ့နော်..ေိေိ သူများတွေ လုပ်တော့ လုပ်ခြင်ကြတာဘဲလေ အဲတော့ နည်းလမ်းကို အောက်မှာ ပြထားပါတယ် အလွယ်လေး...။
ပထမဆုံး သည်မှာ ကလစ်ပြီး သွားလိုက်ပါ နောက် အောက်ကပုံတွေထဲကလို ကလစ်လိုက်ပါ..
မိမိတို့ အပေါ်ကလင့်ကလစ်တာနဲ့ အဲလိုပုံကျလာပါမယ် ဒါဆို ပြထားတဲ့ စာတန်းကိုကလစ်လိုက်ပါ
အပေါ်ကပုံတိုင်းကျလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါဆို Okey ဆိုတာကလစ်ပေးလိုက်ပါ။
မိတ်ဆွေတို့ လိုခြင်တဲ့ Fcebok ID Card လေးရရှိပါပြီ...
လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှု အမှုမှန်ပေါ်ရေး ဂျပန်ရှိ ထိုင်းသံရုံးရှေ့ဆန္ဒပြမှု ( ရုပ်/သံ)
9:01 PM ပြည်ပသတင်း No comments
ထိုင်းနိုင်ငံ လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှုမှာ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ ထိုင်းသံရုံးရှေ့မှာ ဂျပန်ရောက် မြန်မာများက အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့က သွားရောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
သတင်း၊ ဓာတ်ပုံ- ထွန်းဝေ၊ တိုကျို/ ဂျပန်
ထိုင်းရဲက တရားခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးထားတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသား ၂ ဦးနဲ့ သက်သေ အဖြစ်ပြောပြီး ထိုင်းရဲ လက်အောက်မှာ ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁ ဦးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂျပန်ရောက် မြန်မာများက အမှုမှန်ပေါ်
ပေါက်ရေးအတွက် စုဝေး ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့နေ ကိုထွန်းဝေက မေးမြန်းရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်/သံမြင်ကွင်းကို ဧရာဝတီက ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ထိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်အား ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန် ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရ ခွင့်မပြု
ြ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်အား ထိုင်းနိုင်ငံ၌ လူသတ်မှုဖြင့် စွပ်စွဲ ဖမ်းဆီးခံထား ရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန် ခွင့်တောင်းရာ ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရ က ပယ်ချလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် ပရာယွဒ်သည် မနက်ဖြန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ထိုင်းသံရုံး၌ ၎င်းတို့နိုင်ငံသားများနှင့်တွေ့ဆုံရန် စီစဉ် ထားပြီး၊ ၀န်ကြီးချုပ် လာချိန်၌ မြန်မာများက လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှုမှာ စွပ်စွဲဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားနှစ်ဦး အရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန် ခွင့်တောင်းရာ ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရ အဖွဲ့မှ လုံခြုံရေး ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး တင်ဝင်း က ခွင့်မပြုကြောင်း ဆန္ဒပြပွဲ စီစဉ်သူ ဦးနေမျိုးဇင်၏ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ၌ ရေးသားထားသည်။
ထိုင်းသံရုံးရှေ့၌ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်မရ သဖြင့် ရန်ကုန် မြို့တော် ခန်းမရှေ့၌ မနေ့ဖြန် မနက် ၈ နာရီတွင် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုဆန္ဒထုတ်ဖော် ပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်လိုသူ တိုင်းရင်းသားများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ အား လုံးက ပါဝင်ပူးပေါင်းကြရန်လည်း ဦးနေမျိုးဇင် က ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသ ကြီး နယ်စပ်ရေးရာ လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး တင်ဝင်း
အချိန်နှင့် ဒီရေသည် လူကိုမစောင့်ပါ
ပုလဲခိုင် blogger သို့ လာလည်ကြသော သူငယ်ချင်းများအားလုံး မင်္ဂလာပါလို့ နုတ်ခွန်းဆက်သ ဂါဝရ ပြုအပ်ပါတယ်
သီးသန့်Windowဖြင့်နားဆင်ရန် ဘယ်ဖက်အပေါ်ဒေါင့်ကို နှိပ်ပါ။
ငွေလဲနှုန်း သင်လွဲမည့်ငွေ ပမာဏ ရိုက်ထည့်ပါ
*ယောင်္ကျားလေးနဲ့ မိန်းကလေးတွေ ရဲ့ စိတ်သဘောထား (1)
BLOG HTML ကုတ်များ (3)
ချစ်စရာအရွယ် ကလေးကွယ် (1)
တွဲဖက်မစားသင့်သော အစားအစာများ (1)
ပုံအရှင် လှလှလေးတွေ (1)
ဖုန်း နည်းပညာ (2)
ဗိုလ်ချုပ်က ကုလားကို ကုလားလို့ ခေါ်ခဲ့တယ် (1)
မျက်လှည့် ပညာ (2)
အင်တာနက် မင်းသမီး မဖြစ်စေဖို့ မြန်မာ အမျိုးသမီး တို့ ဆင်ခြင်ဆို့ (1)
အင်တာနက်ကနေ ဖုန်းကို ဖရီးခေါ်မယ်(မြန်မာနိုင်ငံအပါ) (1)
ဆော့ဝဲ နည်းပညာ (99)
အချစ်ရေ % ဘယ်လောက်ရှိလဲ
Copyright © ပုလဲခိုင် | Powered by Blogger